Iindaba - [Iingcebiso zokuGcina iFuel] Ukusetyenziswa kwepetroli kumbiwa yahluke kakhulu, umsantsa ophakathi kwabaqhubi abatsha nabadala mkhulu kakhulu?
[Iingcebiso zokuGcina iFuel] Ukusetyenziswa kwepetroli kumbiwa yahluke kakhulu, umsantsa ophakathi kwabaqhubi abatsha nabadala umkhulu kangaka?
Umahluko phakathi komqali wokuqala kunye nomqhubi omdala ayisiyiyo itekhnoloji kuphela, kodwa ikwiinkcukacha zemihla ngemihla…
Xa bejongana neemeko ezahlukeneyo zomsebenzi, abaqhubi abangamagqala banokulawula ngokulula ngamava abo atyebileyo ukuqinisekisa ukuphucuka kokusebenza, kwaye bangcono kunabaqhubi be-novice ngokubhekisele ekongeni amafutha kunye nokungabi naxhala.
Ke yintoni umahluko phakathi komqhubi we-novice kunye nomqhubi omdala osebenzisa i-excavator?
Kwintsebenzo eyiyo, siya kufumanisa ukuba ngenxa yokuba ivalve yokhuseleko kwisekethe ye-hydraulic ivulekile, nje ukuba ukugcwala kwenzeka, nokuba wonyusa umcephe, amandla e-excavator awayi kwanda ngexesha lokusebenza, kwaye inkosi ayisayi kuphinda yinyathele. , Ukuba uyaqhubeka nokunyathela, ioyile eninzi iya kumoshwa.
Khetha indawo efanelekileyo yomsebenzi
Abaqhubi bezilwanyana abanamava baya kukhetha indawo efanelekileyo xa bengena kwindawo leyo, ngokungafaniyo nee-novice ezingena kwindawo ngaphandle kokukhetha. Baza kukhetha ukuphakama okufana nokwegumbi lezithuthi eligcweleyo ukunciphisa ukuphakama kwesikhuseli ngexesha lokusebenza, ukunciphisa umgama osebenzayo, kwaye ngokwendalo kuthintelwe inkunkuma yamafutha.
Ewe, zininzi iinkcukacha ezincinci ngokonga ipetroli. Logama nje usomeleza isifundo sakho semihla ngemihla kwaye ushwankathela iingcebiso zakho zokonga amafutha emsebenzini, ndiyakholelwa ukuba kungekudala uza kuba ngumqhubi wokonga amafutha kunye nokungabi naxhala!